Colombia sonyeere Spain na Italytali n'ịchụso akara "Sanitized Venue" maka ebe ndụ abalị
Home » Njikọ Mkpakọrịta Akụkọ » Colombia soro Spain na Italytali n'ịchụso akara "Sanitized Venue" maka ebe ndụ abalị
Colombia soro Spain na Italytali n'ịchụso akara "Sanitized Venue" maka ebe ndụ abalị
Ruo ọtụtụ izu ugbu a, mpaghara ndụ abalị na-arụ ọrụ na azụ, na-eji oge a nke arụghị ọrụ iji kwadebe dị ka o kwere mee maka mgbe ndị ọrụ ahụike n'ụwa niile kwere ka ịmaliteghachi. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ ezie na n'ọtụtụ mba enweghị ụbọchị a kapịrị ọnụ maka imeghe, mpaghara ahụ jiri oge a na mba dị iche iche mepụta akara mba ụwa nke ga-enye ndị ahịa ohere, mgbe a ga-emepe ebe ọzọ, iji mata klọb ndị ahụ na-enye nchebe dị ukwuu karị.
The International Nightlife Association, abụrụla nzukọ mba ụwa mbụ nwere mepụtara ma bido akara nzuzo na usoro ịdị ọcha site na ịmalite na mmalite nke Eprel ịdị ọcha dị iche maka ngalaba ndụ abalị. E mechara gosipụta akara a n'ihu Jehova Nationstù Na-ahụ Maka Njem Nleta Worldwa nke Mba Ndị Dị n'Otu (UNWTO), ịbụ INA onye otu, na-achọ nkwado mba ụwa yana ịrịọ nkwado nke mba ndị otu UNWTO.
N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, n'April 17th, Nighttali Nightlife Association (Associazione Italiana di Intrattenimento da ballo e di spettacolo -SILB Fipe) kwupụtara nrapado ya na akara akara "Sanitized Venue", ugbu a bụ sọọsọ ọcha dị ọcha n'ụwa niile maka ebe ndụ abalị.
Dị ka Maurizio Pasca, Onye isi oche nke Italian Nightlife Association SILB-FIPE na Onye isi nke European Nightlife Association, kwuru n’oge ahụ, “Obi dị m ụtọ banyere mwepụta nke ụlọ ọrụ nzuzo a n’ụwa niile na enwere m obi ike na ọ ga-aba ezigbo uru mgbe ulo a ga-emepe ọzọ n’ihi na ọ ga - eme ngwa ngwa ịgbake nke ntụkwasị obi nke ndị ahịa anyị ”. Ma ugbu a, mgbe istali na-akwadebe maka ịmaliteghachi ọrụ nke nta nke nta, ndị isi Italiantali na ndị Europe n’onwe ha ekwuola na “N’oge a ọ dị mkpa ọbụna karị na anyị ga-edo onwe anyị ma kwadebe onwe anyị dị ka ngalaba maka mgbe ọ bụla anyị ga-emepe , na-enwe olileanya na ọ ga-abụ n'oge na-adịghị anya ebe ọ bụ na ndị nwe ụlọ ahịa anyị agaghị enwe ike ijide ogologo oge mgbe emechiri. N'akụkụ a, anyị kwenyere na ọ bụ ihe dị mkpa na ndị ọchịchị mpaghara na-ahụ na ndị ọchụnta ego na-ahụ maka ndụ n'abalị na-azọ nzọpụta siri ike ma doo anya na ahụike nke ndị ahịa ha na ndị ọrụ ha.
'Slọ oriri na ọ nightụ nightụ ndị Colombia na-agbasokwa akara ịdị ọcha mba ụwa
Colombia, site na otu ndị otu anyị, Asobares Colombia, araparakwala nso na nsacha na nsacha mba niile "Sanitized Venue". Tụkwasị na nke a, Asobares Colombia gosipụtara n'oge na-adịbeghị anya Atụmatụ Nweghachi Gradual (GRP) n'ihu Gọọmenti Colombia nke, n'etiti ọtụtụ usoro ndị ọzọ, gụnyere ntinye nke akara ọcha nke mba ụwa maka ebe ndụ abalị. N'okwu nke Camilo Ospina Guzmán, Onye isi ala nke Asobares Colombia, “Anyị enyelarị usoro iwu ahụ na Ministri Azụmaahịa na njem nleta na Colombia, atụmatụ a na-etinye echiche ndị ndị ọchụnta ego na ndị otu na-akpakọrịta nke International Nightlife Association gosipụtara na anyị emeela ihe. Ọzọkwa. Ọzọkwa, anyị mepụtara GRADUAL REOPENING PLAN (GRP) nke nwere ụkpụrụ nduzi maka obodo, ebe ndụ abalị, yana maka ụlọ ahịa na azụmaahịa, na-ekwupụta okwu mmeghe ụzọ site na usoro, edemede na oge nke mweghachi, ihe niile agbanyere na usoro ogbugba ndu nke nchekwa nke Mịnịstrị ahụike nke Colombia na ntuziaka ndị sitere n’aka Healthtù Ahụ Ike Worldwa (WHO) ”.
Sfọdụ ụlọ oriri na ọ nightụ nightụ ndị Spen dị ugbu a na-emejuputa atumatu akara
Spain, dịka e kwuru n'elu, bụ mba izizi n'ụwa nke kwadoro akara ịdị ọcha mba ụwa maka ebe a na-ahụ maka ndụ abalị, ma, n'oge ahụ, enweela ebe abụọ na-etinye ya n'ọrụ. Kpọmkwem, n'otu aka, anyị nwere DiscoTropics na Lloret de Mar (Girona) na, na nke ọzọ, Marina Beach Club Valencia, otu n'ime ebe ndị na-aga n'ihu na-enwe ọhụụ na Spain. Ya mere, abụọ ndị a ga-abụ ebe izizi abụọ nke ụwa iji nweta akara ọcha mba ụwa a, na-enweghị ajọ mbunobi n'eziokwu na enwere klọb ndị ọzọ na Spain, Italytali, Croatia na Romania ndị tinyegororị maka ntinye ya.
N'okwu Joaquim Boadas de Quintana, onye odeakwụkwọ ukwu nke International Nightlife Association “isi ike nke akara ọma a bụ na ọ bụ nke ụwa, nke ga-eme ka ọtụtụ ndị njem na ndị ahịa nke ebe ndụ abalị gburugburu ụwa chọọ ya dị ka ntụaka nke ịdị mma na nchebe nke ahụike onye ahịa. Agaghị ahụ nke a naanị n'ọnụ ụzọ ebe a ga-ahụ ya ma ọ dịkwa n'ịntanetị ebe ọ bụ na ebe a ga-enweta akara a ga-edepụta na weebụsaịtị nke International Nightlife Association ka ndị ahịa nwee ike ịhọrọ nke ebe a na-enyefe ntụkwasị obi kachasị na, dabere na nke ahụ, ọbụlagodi ikpebi njem ezumike ikpeazụ ha ”.
Kedu ebumnuche nke akara mba ụwa a?
A na-eji akara idebe ihe ọcha dị iche iche nke mba ụwa "Sanitized Venue" iji gosipụta ebumnuche ndị a:
Nchebe ịdị ọcha: Nye usoro iwu dị mkpa na ihe iji kwado nchekwa ịdị ọcha maka ndị ọrụ na ndị ahịa.
Mmegharị: Na-emegharị ma melite azụmaahịa n'okpuru usoro ọhụụ na-efe efe nke anyị ga-enweta.
Ihe ndị chọrọ: Gosi na nzukọ a ga-ahụ maka usoro ịdị ọcha zuru ụwa ọnụ nke ndị International Nightlife Association kwadoro.
Nkwa: Kwe nkwa na nhazi ahụ ga-adị mma n ’usoro ịdị ọcha na ịdị ọcha.
Mgbochi: Na-enyere aka igbochi mgbasa nke nje na ndị ọrụ na ndị ahịa yana chebe ugwu nke ebe ahụ
Nchọpụta: Na-enyere aka ịchọpụta nsogbu ndị nwere ike ime ka ị nwee ike ịdị ọcha, mgbochi na usoro mmezi.
Icskpụrụ omume: Egosiri ụkpụrụ omume na nkwenye nke ngalaba ahụ, na-ekwe nkwa nchekwa na ahụike yana mmejuputa ya yana nkwalite omume ọma n'etiti ndị ọrụ.
Nkwenye: Weghachi ntụkwasị obi n'etiti ndụ abalị na-eme ka ha nwee obi ike nke ndị ahịa site na iwepu ụjọ ọ bụla, ebe ọ bụ na ha ga-anọ na ebe dị ọcha na nke nwere nje iji chebe ahụike ha na nke ndị ọrụ.
Dị ka Jose Luis Benítez, Onye isi oche nke International Nightlife Association na nke Spain Nightlife na onye nnọchianya nke Ibiza's Nightlife Association, ekwuru na nkwupụta ikpeazu ya, "Nhapụ nke asambodo a bụ ngosipụta siri ike nke itinye aka zuru oke nke abalị na nkwenye iji chebe ahụike na nchekwa nke ndị ọrụ anyị na ndị ahịa na nkwa maka obodo ndụ abalị zuru ụwa ọnụ na-agbakọta ọnụ dịka iji merie nke a ịdị ọcha na nsogbu akụ na ụba ozugbo enwere ike ”.
Binye aka na nkwekọrịta na ụlọ ọrụ mba ụwa kwadoro na ịdị ọcha na nsị nke oghere
Iji mee ka asambodo a bụrụ nke ziri ezi na nke ọma dị ka o kwere mee yana ọkachamara kachasị mma na nhicha na nsị, International Nightlife Association with AFL Group abanyela nkwekọrịta na ụlọ ọrụ mba ụwa aha ya bụ Elis Pest Control. Companylọ ọrụ mba a, nke nwere ọnụnọ na mba 27 gburugburu ụwa ma bụrụ nke ndị ọrụ ahụike nyere ikike, bụ ọrụ maka ịrụ ọrụ nsị niile na nhicha nhicha na ebe ndụ abalị nke nwere akara maka ya na, kpọmkwem, omume ndị a:
1- Aka antisepsis emereme
2- Nrụgide nje
3- Omume igbu egbu
4- Omume megide mycrobacteria
5- Ime ihe na-eme yist
6- Omume nje
Ozugbo emechara disinfection kwesịrị ekwesị, na ozugbo ekwenyela na ụlọ ọrụ ahụ nwere ọkwa mmado na ebe a zụrụ ndị ọrụ ahụ, ụlọ ọrụ Elis Pest na-enye asambodo na-ekwupụta na etinyere ụlọ ọrụ ahụ na usoro disinfection. Asambodo a etinyere na nke ndi International Nightlife Association mechara weputa.
N'ime ihe karịrị 30% nke ikike ikuku ụgbọ elu nke China na-alaghachi n'ọnwa abụọ gara aga
Ndị otu ụlọ oriri na ọratesụ Hotelụ gụnyere Board Advisory Board iji chee nsogbu COVID-19 ihu